သရော်စာ Satire နဲ့ ဟာသအမည်း Black Humor | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
သရော်စာ Satire နဲ့ ဟာသအမည်း Black Humor	Posted by mm thinker on June 11, 2008
Posted in: Article, Satire, Sharing.	Tagged: Article, Satire, Sharing.	သရော်စာ Satire နဲ့ ဟာသအမည်း Black Humor
(သင်ကာ၏ မှတ်ချက်။ ။ (၁) `မြန်မာဘလော့ကာ (မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း) တို့၏ တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်များ´ ဆိုသည့် ဘလော့ဂ်တစ်ခုပေါ်လာခဲ့သည်။ စတင် တင်စကပင် ဖတ်လိုက်ရသည်။ နည်းနည်းလေးကြာမှ ပွထလာသည်။ သရော်စာရေးဟန်ဖြင့်သွားလိုသည်ဟု ယူဆရသော်လည်း သရော်စာအဆင့်မရောက်ဘဲ အပုပ်ချစာဖြစ်သွားရသည်ဟု မြင်မိသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အရေးခံရသူအဖို့ အကျိုးမများဘဲ အဆိုးဖြစ်ကာ ဘလော့ဂ်ပိတ်သွားရခြင်းပင်။ ထို့ပြင် လတ်တလောတွင် မျိုးဆက်သစ် မြန်မာဘလော်ဂါတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားပြီး နောက်တက်လာမည့် ဘလော်ဂါလေးများကို ခြေချုပ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားခြင်းပင်။ ယင်း ၁၀၀၁ ကို တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် `လူတတ်ကြီး 88´ဟူ၍ ဘလော့ဂ် ထပ်ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ယင်းဘလော့ဂ် အရေးအသားသည်လည်း သရော်စာ မမြောက်လှပါ။ ကဘောက်တိ ကဘောက်ချာ နိုင်သည်။ သရော်စာသည် အရေးခက်ပါသည်။ ကလိထိုးပြီးရယ်ရတာမျိုးလည်း မဟုတ်၊ အမှန်တရားကို ဆွဲတင်လွန်းအားကြီးသဖြင့် ခံရသူအဖို့လည်း မချိသွားဖြဲ၊ ဖတ်ရသူအဖို့လည်း ဘ၀င်ကျသည့်စာမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ ဘလော်ဂါများထဲတွင် သရော်စာ အရေးပိုင်သူ၊ ရေးတတ်သူများမှာ စိတ်ထဲပေါ်သမျှ လျှပ်တပြက် ကောက်ပြောရရင် ကလူသစ်၊ ကိုမောင်ဒိုင်း နှင့် နောက်တက်ဘလော်ဂါထဲတွင် ကိုရင်ညိန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုကြားရေးလေ့ရှိသူမှာ တာဝတိံသာတုတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ကိုလျှာရှည်နှင့် ကိုပြောင်ရှည်ကိုမူ သရော်စာဘလော်ဂါအဖြစ်သာမက၊ မြန်မာဘလော့ဂ်လောကတွင် တစ်ဦးတည်းသော ခေတ်ပြိုင်မရှိ ပြဇာတ်ဆရာဘလော်ဂါဟု ကျနော် သတ်မှတ်ပါသည်။ သရော်စာဘယ်လိုရေးသလဲဟု ဘလော့ပေါ်တွင် အလွယ်ကြည့်ချင်ပါက သူတို့ထံသွားပါဟု ညွှန်းလိုပါသည်။ (၂) သရော်စာဆိုလျှင် ဦးပုည၊ အချုပ်တန်းဆရာဖေတို့မှအစ မောင်ထင်၊ သော်တာဆွေ၊ မာဂျေ၊ ဂျက် (ကွန်းခြံကုန်း) မှအလယ် နောက်ဆုံး ဘလော်ဂါကိုရင်ညိန်းတို့အထိ အလွတ်မပေးတတ်သော ကျနော်သည် အလျဉ်းသင့်စွာပင် ရန်ကုန်ရောက်ခိုက် စာအုပ်စင် အမွှေတွင် ဒေါက်တာခင်မောင်ညို၏ သရော်စာအကြောင်း ဆောင်းပါးကိုတွေ့၍ ကူးယူလာခဲ့ပါသည်။ သရော်စာ အမျိုးအစားအချို့ကို အကျဉ်းချုပ် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ကျနော့်အထင်တွင် ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုသည် ယခင် စာပေဗိမာန်ထုတ် သရော်စာ စာတမ်းများ စာအုပ်ကို ကိုးကားရေးသည်ဟု ယူဆပါသည်။ သို့သော် ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုက အညွှန်းပေးထားသည်ကို မတွေ့ရပါ။)
တစ်ရက်မှာ လူငယ်တစ်ဦး အိမ်ကိုရောက်လာပြီး ကျွန်တော့်ကိုမေးတယ်။ `ဆရာမာဂျေရဲ့ စာက ရယ်ရတယ်။ အဲဒါ ဟာသစာပေပဲလား ဆရာ´
တကယ်တော့ ကျွန်တော်က စာပေနယ်မှာ ဆရာဇော်ဇော်အောင်တို့ တက္ကသိုလ် မင်းမော်တို့လို မကျွမ်းကျင်ပါ။ သို့သော် မိမိဖတ်ဖူးတဲ့ ဗဟုသုတထဲမှ ဆွေးနွေးမိတယ်။ `မောင်ကိုယုတို့ အရင်ခေတ်ကပေါ့လေ၊ ခုခေတ်ဆရာမာဂျေတို့ ရေးတာတွေဟာ ဟာသထက် သရော်စာပုံစံတွေဖြစ်တယ်´လို့ ပြောပြမိတယ်။
သရော်တယ်ဆိုတဲ့ Satire မှာ စေတနာ အပြည့်အ၀ ပါတယ်လို့ဆိုတယ်။ သူက လူတွေရဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ (ဟန်ဆောင်) အပြုအမူတွေ၊ လောဘတွေ၊ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်တာမျိုးတွေ ကြွားဝါတာတွေ အာဏာပြတာတွေကို နှိပ်ကွပ်ချင်တဲ့ အရေးအသားတွေ အများကြီးပါတယ်။ ယနေ့စာပေတွေမှာ ဒီလို အရေးအသားတချို့ကို တွေ့နေရသေးတယ်။ ဂန္ထ၀င်ထဲမှာလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့ သရော်စာတွေကျတော့ လူတွေရဲ့ ဟာသဆန်တဲ့ ဘ၀တွေကို ဖော်ကျူးတာတွေ ပါဝင်လေ့ရှိတယ်။ သရော်စာအများစုကတော့ စာပေနယ်မှာ နေရာရတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ သက်ဆိုင်ရာ သရော်စာလေးတွေတော့ရှိတယ်။
← Coming Soon	Existence Magazine – Vol.1, Issue.3 – Download →	Pages	about